घरभेटीले निकालीदिएपछि १५ वर्षकी बालिका ज्यातीले बिरामी बाबुलाई साइकलमा बोकेर १२ सय किलोमिटर यात्रा गरिन् ! – AB Sansar
घरभेटीले निकालीदिएपछि १५ वर्षकी बालिका ज्यातीले बिरामी बाबुलाई साइकलमा बोकेर १२ सय किलोमिटर यात्रा गरिन् !
December 25, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on घरभेटीले निकालीदिएपछि १५ वर्षकी बालिका ज्यातीले बिरामी बाबुलाई साइकलमा बोकेर १२ सय किलोमिटर यात्रा गरिन् !
एजेन्सी । लकडाउनको समयमा परेको अप्ठेरोमा अहिले सहयोग गर्ने भनेको परिवारका सदस्य मात्र हुन् । लकडाउनका कारण वाहिर निस्कन नपाएको हुँदा अहिले सबै परिवारका सदस्यसंगै बसेका छन् । एक अर्काको मन भुलाउने बाटो परिवारका सदस्य भएका छन् । तर त्यही परिवारका सदस्यलाई अप्ठेरो भयो भने कति सम्म गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण एक १५ वर्षकी बालिकाले देखाएकी छन् । भारतकी ज्योती कुमारी पासवान नामकी १५ वर्षीया बालिकाले आफ्ना बिरामी बावुको उपचारका लागि गरेको साहसिक यात्राको अहिले विश्वभर चर्चा भएको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
अरु चार सन्तान लिएर ज्योतीको आमा गाउँमै छन् भने ज्योती बुवाको रेखदेखका लागि उनीसंगै थिइन् । बाबु विरामी भएपछि ज्यातीले साइकलमा जान बुवालाई आग्रह गर्दा सुरुमा उनका बुवाले मानेनन् । तर अरु केही उपाय नभएपछि ज्योतीको निर्णय मान्न उनी बाध्य भए । बस वा रेल केही थिएन । अन्य सवारीसाधन पनि तत्काल उपलब्ध हुने कुनै संकेत थिएन । हिँडेर जानु त असम्भव जस्तै थियो, त्यसैले छोरीको त्यो आग्रह अस्विकार गर्न सकिन उनले भने ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
कोरोना संक्रमित व्यक्ति झूटो बोलेर उडान गर्दै थिए, जहाजमै भयो मृ’त्यु !